BIME: Software oo ah Sirdoon Ganacsi Adeeg | Martech Zone
Maaddaama tirada ilaha xogta ay sii kordheyso, sirdoonka ganacsiga Nidaamka (BI) ayaa kor u kacaya (markale). Nidaamyada sirdoonka meheraddu waxay kuu oggolaanayaan inaad ku horumariso warbixinta iyo dashboodyada ku saabsan xogta dhammaan ilaha aad ku xidhan tahay. BIME waa Software sida Adeeg (SaaS) Nidaam Sirdoon Ganacsi oo kuu oggolaanaya inaad ku xirmaan labada khadka tooska ah iyo kan adduunka ka jira oo isku meel ah. Abuur xiriiro dhammaan ilaha xogtaada, abuur oo samee su'aalaha oo si fudud ugu arag dashboodyadaada - dhammaantoodna waxay ku dhex jiraan isdhexgalka quruxda badan ee BIME
BIME wuxuu u dhaqmi karaa sidii "akhriste nool", oo ka shaqeeya meel fog iyo waqtiga-dhabta ah. Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad ku martigeliso xogtaada daruuraha. Si kastaba ha noqotee, doorashadani waxay leedahay faa'iidooyin badan: marin u hel xogtaada wakhti kasta iyo meel kasta. Waxay kuxirantahay cabirka xogta, waxaad geyn kartaa xogtaada si dhib la’aan ah Djàa Vu, BimeDB ama Google BigQuery.
Iyada oo BIME aad leedahay cad oo joogto ah qaabka weydiinta dhammaan xogtaada. Gali “waxyaabaha” aad rabto inaad ku falanqeyso safafka iyo tiirarka waana lagaa dhammeeyay. Kadib shaandhee ama jarjar. Waxyaabaha si firfircoon u kooxe, ku shaandhee adiga oo ku saleynaya xeerar adag ama cabir saamaynta isbeddelku ku yeesho tirooyinkaaga kale.
Iyada oo BIME ayaad ku abuuri kartaa muuqaalada isdhexgalka taas oo muujin doonta isbeddellada iyo qaababka ku qarsoon xogtaada. Waad qaabeyn kartaa adoo shaandhaynaya taxanaha ama kashifaya xogta aasaasiga ah. Wax walba waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo xaddiga macluumaadka ugu yar ee ugu yar ee booska. Waad ka faa'iideysan kartaa midabaynta iyo qaabeynta cabbirka tusaale ahaan, ama waxaad ku ciyaari kartaa xulashooyin badan oo ku habboon qaabeynta shaxda.
Isbarbar dhig kaaga web Analytics data xafiiskaaga dambe, ku cabiro ololahaaga dhabta ah 'ROI' miisaaniyadaada xaashida. Dhammaan hal dashboard. Adiga oo adeegsanaya astaamaha iyo cabbiraadaha xisaabsan ee BIME, isbadalada caalamiga ah, kooxaha, xirmooyinka iyo xubnaha kale ee la xisaabiyay waxaad ka eegi kartaa xogtaada xagal kasta.
Ku fur awoodda keydka keydka macluumaadka Isweydaarsiga. Isticmaalayaashu waxay weydiin karaan daraasiin ilo waxayna macno u samayn karaan iyaga - iyadoon loo eegin luqadda weydiinta, feylka, iyo qaababka metadata. QueryBlender wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala inay isku daraan oo ay u ekaadaan wixii macluumaad ah, laga soo bilaabo waraaqo dhaxalgal ah iyo xog-ururinno waaweyn oo xiriir la leh si ay u noolaadaan xogta laga helayo Google Analytics, Google Apps, salesforce.com, ama Adeegyada Websaydhka Amazon.
Waxyaabaha si firfircoon u kooxe, ku shaandhee adiga oo ku saleynaya xeerar adag ama cabir saamaynta isbeddelku ku yeesho tirooyinkaaga kale. BIME waa mishiinka xisaabinta wuxuu leeyahay wax kasta oo aad u baahan tahay, iyo xitaa in ka badan. Ha ka baqin inaad qorto lambar; waxaan leenahay interface qurux badan oo adeegsade ah oo loogu talagalay soo saarista xisaabinta ugu badan. Fursadaha dib-u-shaqeysta kadib ayaa kuu badbaadin doona saacado waxayna kuu oggolaaneysaa inaad ku guuleysatid xisaabinta guud adigoon qorin hal caano.
kasta BIME liisanka wuxuu ka bilaabmaa 20 dashbood, 10 isku xirnaanta xogta, 1 naqshadeeye iyo daawadayaasha dashboard aan xad lahayn.
Tags: Amazon Adeegyada WebBigQueryBimeDBsirdoonka ganacsigatomato VUAnalytics googlebarnaamijyada googleGoogle BigQuerySalesforce.com
Warbixinta Tixraaca Suuqgeynta B2012B ee 2